Portal:Antarktika - Gpedia, Your Encyclopedia
Ma lahan dad joogto u degan
Dowlad u gaar ah ma lahan
Hadii Antarktika la barbardhigo qaarada Ustareliya weey ku labo laabmaysaa, taasi micnaheedu waa in Ustareliya le'egtahay kala badh Antarktika. Sida la ogyahay ilaa 98% qaarada Antarktika waxaa qariyahay baraf kaasi oo leh dhumuc dhan 1.9 kilomitir (1.2 mayl), kuna fidsan dhamaan deegaanada qaarada marka laga reebo qeybta waqooyi oo kali ah. Isku celcelis, qaarada Antarktika waa tan ugu qaboow, qalalsan, ee ugu dabaysha badan qaaradaha caalamka oo dhan. Sidoo kale waxay leedahay deegaano badan oo ugu dhaadheer jooga dhulka. Juquraafi ahaan marka laga hadlayo deegaanada Antarktika waxaa lagu tiriyaa lamadegaan (saxare), sababtoo ah waxaa ka da'a roob aad u yar oo mararka qaar ka yar 200 mm (8 in) kaasi oo ku da'a deegaanada xeebaha oo kali ah. Sidoo kale waxaa xusid mudan heerkulka Antarktika, wuxuu inta badan yahay −89 °C (−129 °F), in kastoo marka la iskucelceliyo guud ahaan noqonayso −63 °C (−81 °F).
Cidhifka Koonfureed (Af-Ingiriis: South Pole) waa geeska ugu shisheeya ama ugu fog ee koonfurta meeraha dhulka. Dunida aan ku nool nahay ee dhulka waxay leedahay labo cidhif oo kala ah Cidhifka Waqooyi iyo Cidhifka Koonfur ee dhulka.
Cirifka Koonfur ee aduunka waxee ku taalaa koonfurta ugu hooseeso aduunka. Cirifka Koonfur iyo Cirifka waqooyi waa meelaha 6 bilood maalin ah, 6 bilood habeen ah.labadaan meelood waa meesha oo aduunka ka wareegto.Meeshani waa meesha aduunka ugu nolosha adag amaba ugu daran,qofkii ugu horeeyay ee tagaa waxa uu ahaa Roald Amundsen waxay ahayd sanadii 1911. Dhinaca kale, qaarada Antarktika ma lahan dad si joogto ah ugu dhaqan ama nool deegaanadaadi. Laakiin waxaa wakhtiyo badan oo sanadka ah jooga tiro Saynisyahano iyo cilmibaadhayaal ah oo u dhexeeya 1,000 ilaa 5,000 qof kuwaasi oo ku baahsan dhinacyada qaarada. Noolaha sida dabiiciga ah looga helo qaarada Antarktika waxaa ka mid ah algae, bakteeriya, fungi, xoogaa yar oo dhir ah, brotista, iyo noocyo kooban oo xayawaan ah, sida takfida, qooleeyda, sealska, iyo tardgrade. Dhirta ugu caansan ee laga helo deeganku waa tundra.
Xuquuqda: National Science Foundation (2005)
Iftiinka dayaxa iyo habeenkii ee antarktika
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Portal:Antarktika&oldid=167846"